ကိုရင်ရှူံး (သို့) ကိုရင်စိုင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ကိုရင်ရှူံး (သို့) ကိုရင်စိုင်း
ကိုရင်ရှူံး (သို့) ကိုရင်စိုင်း
Posted by စဆရ ကြီး on Nov 15, 2013 in My Dear Diary | 20 comments
တင်းသည်ဆိုသည်ထက် တင်းလွန်းလို့ ပေါက်ကွဲထွက်ကုန်သည်ဟု ဆိုသည်က မှန်ပေမည်။
ထိုသူသည် ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ရှာသည်လို့ ဆိုလေမလား
ငယ်ချစ်ကိုစွန့်ခွာလို့ ချစ်သူအသစ်နှင့် ဘ၀သစ်ကို စသွားလေပြီ…
သူမ၏ ချစ်လှစွာသော သား/သမီးများကို သံချောင်းလေးမှမခေါက်၊ အနည်းငယ်သော်မျှ အကြောင်းမကြားပါလေပဲ သူမတစ်ယောက် ဘ၀ပြောင်းလိုက်လေ၏။
မျက်စိသူငယ်၊ နားသူငယ်နှင့် ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲသွားခြင်းကို နားမလည်ခြင်းမှာတော့ သားကြီး၊ သမီးကြီးများ မရှင်းပြသဖြင့်လည်းကောင်း၊ အရွယ်မရောက်သေး၊ မရင့်ကျက်သေးသော သားသမီးများ နားမလည်နိုင်ခြင်းမှာတော့ အပြစ်တစ်ခုဟု မဆိုသာနိုင်ပေ။
အရာရာတိုင်း ကောင်းဖို့ချည်းသာ ဖြစ်လာသည်ပေါ့လေ။
ကိုရင်ရှူံးသိလိုက်ရသည်။ သိလိုက်ရဆို ကိုရင်ရှူံးသည် ကိုရင်ရှူံးဆိုလျင် ထိုမိခင်ကြီး၏သားတစ်ယောက်အနေနှင့် တွဲသိမြင်ကြခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ကိုရင်ရှူံးတစ်ယောက် ရှူံးနိမ့်၊ နိမ့်ကျနေသောအချိန်တွင် ရင်ဖွင့်စရာသည် ထိုမိခင်ကြီးရင်ခွင်တစ်ခုသာရှိခဲ့သည်။ ထိုမိခင်ကြီးမှ မွေးဖွားသန့်စင်လာသော သားသမီးများမှ၊ တစ်နည်းဆိုရသော် ထိုမိခင်ကြီးမှ မြေတောင်မြှောက်ပေးလိုက်သော သားကြီး၊ သမီးကြီးများမှ နှစ်သိမ့်ဖေးမ ကူညီခြင်းများဖြင့် ကိုရင်ရှူံးတစ်ယောက် လူလားမြောက်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုရမည်ပင်။
အစဦး ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလက ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနေရင်း နောက်ဆုံးတွင်မှ ရွှေဥဒေါင်းကို သဘောကျပြီးသည့်နောက် ကိုရင်ရှူံးတစ်ယောက် အတော်လေး အရွယ်ရင့်ကျက်လာတော့သည်။
ထို့နောက်တွင်မတော့ ကိုရင်ရှူံးတစ်ယောက် နာမည်ပေး၊ ကင်ပွန်းတပ်မလုပ်ပဲ တစ်ယောက်တည်း ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်နာမည်ပြောင်းလိုက်၏။
“ဖြူစိုင်းလူ” ဖြစ်သည့်အချိန်မှ၏ ကိုရင်ရှူံးတစ်ဖြစ်လဲ အရာရာ ရှူံးနိမ့်နေသူအဖြစ်မှ ရုန်းထပြီး လောကကြီးကို ရင်ဘတ်ကြီးကော့ပြီး ရင်ဆိုင်လေမဟဲ့ဟု ကြွေးကြော်ပြီး ဘ၀သစ်တစ်ခုကို စခဲ့၏။
ကိုရင်ရှူံး (သို့) ကိုရင်စိုင်းမိခင်ကြီးလည်း နောက်ယောက်ကျာ်းနှင့် ပေါင်းသွား၏။ ကိုမီမီကြောင်ကြီးနှင့် မသင့်မြတ်သောကြောင့်ဟု တစ်ယောက်သောသူဖွသဖြင့် သိလိုက်ရ၏။ အူးကြောင်နဲ့တော့ အထင်မမှားစေလိုပါ။
ထိုမိခင်ကြီးမွေးထုတ်လိုက်သော ဘီလူးတို့၊ ငှက်ကြီးတို့၊ အဆူးအခက်တွေတို့၊ မမှီတို့၊ တစ်ချိန်က တိမ်မြုပ်နေခဲ့သော ကိုသော်ဇင်တို့၊ ဦးနိုဇိုမိတို့၊ ဦးလင်းမြွေတို့၊ ဒေါ်ပုခ်ျတို့၊ ခုလေးတင် ပြန်အသက်ဝင်လာသော ဒေါ်မွန်းပိုဝမ်တို့…
ယခင်ကထက် ပိုသော ရှူံးနိမ့်ခြင်းများဖြင့်.. တစ်ကောင်တည်းနေရင်း
သူလဲ​လေ ​ဘောင်းဘီချွတ်​ပြီး ပုဆိုးဝတ်​လိုက်​ရုံပါပဲ ….
ကိုရင်​စိုင်း ပြန်လာတာပဲ ​ကျေးဇူးတင်​​နေရမှာပါ
တစ်ချို့တွေက ကျော့် မရှိ ရှိတာလေးတွေကို ဇွတ်အတင်းချီးကျူးကြတယ်.. အဲလိုဆိုတော့ ကိုယ်ဘာကောင်လဲသိနေတော့ ရှက်တယ်ဗျာ.. ဂယ်
အဲလိုအပြောခံရတော့လဲ မျက်နှာမဖေါ်နိုင်အောင် ရှက်ပြန်ရော
အရည်မရ၊ အဖတ်မရ၊ ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတာတွေ ရေးနေပြီးတော့
လို့ဆိုပြီး ရှုတ်ချတာလဲ ခံရဖူးတယ်ပေါ့
ဆိုတော့ ကျော်လဲ ရင်ဘတ်ထဲဘာရှိ်မလဲ စမ်းလိုက်တယ်
တစ်ချို့လူတွေ သိပ်လှတာပဲလို့ အားကျငေးကြည့်ချင်ကြည့်ပစေ
တစ်ခါကြည့်ပြီး တစ်နေရာရာကို လွှင့်ပြစ်လိုက်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်
ရင်ဘတ်ကြီးကို လူလယ်ကောင် ဖြန့်ဖြန့်ထားခြင်းသက်သက်သာဖြစ်ပါကြောင်း။
လက်ရှိလိုဂို ဒီဇိုင်းကြီး ကို အကြွေဇိ ..ပြန်ထုတ်ရင် သုံးဖို့ မြန်ကျင့်အစိုးရ ၀ယ်သင့်တယ် ထင့်…
ကျော်လဲ ခုလို စာတစ်တန် ပေတစ်ဖွဲ့နဲ့ အားပေးထားပါတယ်
(အိတ် ၀စ်လစ်စလစ်ကြီးနဲ့ ပေးထားတာမှာတော့ ပြန်ချေပထားသား)
သူလဲ အူးကျော်စမ်းအမျိုးလားမသိ.. ရှင်းတော့ သေသေချာချာ ရှင်းပြသွားတာပဲ.. ချုံကြီးကတော့ ဟီးထနေတုန်းပဲ.. ပညာတွေ တတ်လိုက်ပုံများပြောပါဒယ်
နောက်ဆုံးအပိုဒ်ကတော့ ဇာတ်လမ်းနှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်တည်း အနှစ်ချုပ်ပြခြင်းသက်သက်ပါ အူးမကြီးမငယ်မိုက်ကြီးရေ
(ပြောမယ့်သာပြောရတယ်. အဲဒီစာကို ပြန်ဖတ်တိုင်း တော်တော်လေး သောက်ညင်ကပ်လာတယ်)
ကိုရင်စိုင်း အရေးအသားက လန်ထွက်နေတာပဲ…။ အောက်ဆုံး အပိုဒ်သာ မပါရင် နားလည်မှုတွေလွဲတော့မှာပဲ…။ အရေးအသားကတော့ တော်ချက်…။
ကျော့်စာကို ပထမဆုံးအကြိမ်ဖတ်ဖူးတယ်လို့ပဲ တွက်လိုက်ပါမယ်
ကျော်ခုရေးထားတာ သူများတွေနဲ့ဘယ်လိုယှဉ်ယှဉ် ပေါချာချာအဆင့်ထက်တစ်ဆင့်နိမ့်တဲ့ မူကြိုပေါချာချာသာဖြစ်ပါကြောင်း။
ကိုစိုင်းရဲ့စာတွေကို ကိုရှုံးဘ၀ ကတည်းကဖတ်ဖူးပါတယ်…။ အဲဒါကြောင့်လည်း ဒီ Post ကို ဖတ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုရှုံးရဲ့ ဘ၀ ဇာတ်ကြောင်း တစိတ်တဒေသများလားလို့ ထင်နေရာကနေ အောက်ဆုံးအပိုဒ်ရောက်မှ ဆိုလိုရင်းကိုသိတော့တယ်…။ အဲဒါကြောင့် ကိုစိုင်းရဲ့ အရေးအသားကို ချီးကျူးလိုက်တာပါ…။
သူကြီး အစွဲကျွတ် သွားတာ။ဆြာနဲ့တွေ့သွားလို့။ ဘုန်းကြီး သရဲထက်ဆိုးတယ်။ ပြောတော့ လူ့အခွင့်အရေး ။ တန်းတူညီမျှရေးတွေအော်ပြီး ကိုယ်တိုင်က မန်းလေး ကို ဖတ်တွယ်ထားတာ။ နောက်ဆို WG (world gazette) တို့ UG တို့ လာမှာ။ ဦးဂျမ်း ဟုတ်ဘူးနော်.(Universe gazette)။
ကျော် စဉ်းစားရတာ ဘောင်းဘီကျပ်တွားဒယ်..
ကျော့်ကို သျှမ်းလို ပြန်ရှင်းပြစေလိုဘာဒယ်။
အင်းနော်၊ တချိန်က မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာကို မြင်းမအလံ လို့ခေါ်ကြဖူးတယ်။ အခု မြန်မာ့ဂဇက် ဆိုတော့ မြက်မဂ္ဂဇင်း လို့ ခေါ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ဆရာမနာမည်ကို မြင်လိုက်ရတော့ နည်းနည်း မြောက်တောက်တောက်ရှိသွားတယ်.. ဘာပဲပြောပြော စာရေးဆရာမတစ်ယောက်က ငါ့ကို အသိအမှတ်ပြုတယ်ပေါ့..
ကျော့်ကို စာရေးဆရာတစ်ချို့တော့ သိသေးတယ်လို့ပဲ ကျေနပ်လိုက်ပါတယ်။
လိုဂို ကို တောက်ငြင်ကပ်တာကိုး။ နာမည်ပြောင်းထားတာကိုရော။ စောစောက သူပဲ မန့်သလေးဂွဇွတ် ဆိုပြီး
ဘယ်ကိစ္စ မဆို ရာနှုန်းပြည့် လူတိုင်း သဘောကျဘို့ ဆိုတာ ခက်တာမို့
အခု အမည် နဲ့ လိုဂို ပြောင်းတာ လဲ လူတိုင်း ကြိုက်ဘို့ တော့ မလွယ်ဘူး
ကျနော် ကိုယ်တိုင် (တစ်ခုခု ဆ်ို အစွဲအလမ်း ကြီးလို့ ပဲ လား မသိ )အရင် အဟောင်းတွေကို တော့ ပိုသဘောကျမိတယ်
သူကြီး က ကောင်းတယ် ထင်လို့ လုပ်တာမို့ ထူးထူးထွေထွေ တော့ ပြောစရာ မရှိပါဘူး
တစ်ခုပဲ ဖြစ်နိုင်ရင် မပြောင်းခင် ရွာသူားတွေ ရဲ့ သဘောထားလေး ကြိုမေးနိုင်ရင် ဒီမို သူကြီး ပိုပီသသွားတာပေါ့ ၊ မေးဘို့ အခက်အခဲ ဖြစ်ရင်တောင် ကြိုတင်တော့ အသိပေးသင့်တယ် ထင်တာပဲ
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ ဘယ်နံမယ် ဘယ်လိုဂို နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ပျော်တဲ့ ရွာလေးမို့ ဆက်ပျော်နေမှာတော့ အသေအချာပါ
ဟို တစ်လောက ရွာထဲမှာ ခါးပိုက်နှိုက် ဖမ်းမိတဲ့ ရွာသားတစ်ယောက်က သူ့ အတွေ့အကြုံလေး
ရေးထားတာ ဖတ်ရတော့ ခါးပိုက်နှိုက်ကို ကားပေါ်မှာ ဖမ်းခဲ့ တဲ့ ဘီလူးကြီး တောင် သတိရနေသေးတာ
ချင်ကားပူ ရောက်တုန်း ရေးတာလေး ဖတ်လိုက်ရပြီး နောက်ပိုင်း ဘယ်ရောက်နေလဲ တောင် မသိတော့ဘူး
တခြားလုပ်ငန်းတွေ မြန်မာပြည် အသီးသီး ပြန်ဝင်နေကြတာ
ကိုစိုင်းတို့ ရော မ၀င်သေးဘူးလား
လိုဂို၊ နာမည် ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း သာမီးဒေါ်ဂလေးက ဒီအတိုင်းပါဗဲဗျာ.. ပိုပိုလှလာဒယ်..။ အဲ.. သဂျီးဂဒေါ့ တနေ့တခြား အိုမင်းရှုံ့တွ ရင့်ရော်ကြမ်းထော် အော့အော့ဂျင်စရာကောင်းတဲ့ ဗူးသီးအိုဂျီးလို ဖြစ်လာတာတော့ ရှိသပေါ့.. ဇရာ၊ ဗျာဓိ၊ မရဏ အသူမှ လွန်ဆန်နိုင်တဲ့ တရားတွေမှ အဟုတ်ပဲဂိုဗျ…. ပလို့ဂျိ..